Yesu Agye Yɛn​—Nea Enti a Yɛpɛ Nkwa ne Nea Enti a Yɛhia Ɔgyeɛ
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chiyao Chokwe Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maltese Mam Mambwe-Lungu Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
ASƐM A ƐDA SO | YESU AGYE YƐN—AFI DƐN MU?
Adɛn Nti na Yɛhia Ɔgyeɛ?
“Onipa a ɔbaa awo no, ne nna yɛ tiaa bi, na ɔhaw mee no. Ɔpue sɛ nhwiren, na wɔtwa no twene; ɔdwane sɛ sunsum, na ɔntena ase bio.”—Hiob 14:1, 2.
Bɛboro mfe mpem mmiɛnsa ni a Hiob kaa saa asɛm no, nanso yɛda so ara hu sɛ ɛyɛ nokware. Efisɛ, efi teteete nyinaa, nnipa nyae a anka bere nyinaa wɔyɛ mmerante ne mmabaa a wɔwɔ ahoɔden. Nanso, awerɛhosɛm ne sɛ, yɛwu!
Nea anka obiara pɛ ne sɛ ɔbɛtena ase afebɔɔ. Bible ka sɛ, Onyankopɔn de bere a ɛnni awiei ahyɛ yɛn koma mu, na yɛtumi nso dwendwene nea daa nkwa kyerɛ ho. (Ɔsɛnkafoɔ 3:11) Sɛ saa a, wogye di sɛ ntease wom sɛ ɔdɔ Nyankopɔn no de biribi a yɛn nsa rentumi nka bɛhyɛ yɛn koma mu? Sɛ wo mmuae yɛ dabi a, woabua no yie. Efisɛ, Bible ka sɛ owuo yɛ ɔtamfo, na Onyankopɔn ahyɛ bɔ sɛ ‘ɔbɛtu no agu.’—1 Korintofoɔ 15:26.
Ampa, owuo yɛ ɔtamfo; obiara nni hɔ a n’adwene mu da hɔ a ɔpɛ sɛ owu. Sɛ yɛhunu sɛ asiane bi reba a, yɛtwe yɛn ho, yɛde yɛn ho sie, anaa yɛdwane. Sɛ yɛyare a, yɛbɔ mmɔden hwehwɛ ayaresa. Yɛyɛ nea yɛbɛtumi biara de bɔ yɛn ho ban fi biribiara a ɛbɛtumi de yɛn nkwa ato asiane mu ho.
Enti biribi wɔ hɔ a yɛbɛtumi agyina so aka sɛ saa ɔtamfo a wateetee yɛn fi teteete no befi hɔ? Aane, biribi wɔ hɔ. Yehowa Nyankopɔn, Ɔbɔadeɛ no, ammɔ nnipa sɛ wɔntena ase bere tiaa bi na afei wɔnwu. Ɛnyɛ Onyankopɔn adwene a ɔde bɔɔ nnipa ne sɛ wɔmmɛwu. Ná ɔpɛ sɛ nnipa tena ase daa wɔ asase so, na nea ɔpɛ sɛ ɔyɛ biara nso, ɔyɛ!—Yesaia 55:11.
Ɛnde na ɛbɛyɛ dɛn na owuo afi hɔ? Efi teteete na nnipa abɔ mmɔden sɛ wɔbɛnya owuo ano aduru, nanso ayɛ ɔkwa. Ɛnnɛ nso, wɔgu so ara rebɔ mmɔden sɛ wɔbɛnya owuo ano aduru. Nyansahufo ayɛ nnuru ahorow a wɔde bɔ nkurɔfo ho ban ne nnuru a wɔde ko tia nyarewa bi. Wɔayɛ nhwehwɛmu ahu sɛnea abɔde a nkwa wom te. Ɛnnɛ, wɔ mmeae pii no, ɛrekame ayɛ sɛ nnipa nyin kyɛ sen kan no. Nanso, owuo da so ara di hene. Bible ka sɛ, “wɔn nyinaa san kɔ dɔteɛ mu.”—Ɔsɛnkafoɔ 3:20.
Anigyesɛm ne sɛ, ɛho nhia sɛ yɛde yɛn ho to nnipa so sɛ wɔnyi owuo a ateetee nnipa fi teteete no mfi hɔ. Yehowa Nyankopɔn ayɛ nhyehyɛe sɛ ɔbɛgye yɛn afi owuo mu, na nea ɔnam no so bɛyɛ saa ne Yesu Kristo.